Maitiro ekudzima WhatsApp zvemukati kubva ku iPhone yako uye chengetedza nzvimbo IPhone nhau
Maitiro ekuburitsa nzvimbo paWhatsApp neyako nyowani space maneja
WhatsApp Inoenderera mberi nekushandisa zvinhu zvitsva mukushandisa kwayo zvinoita kuti kushandiswa kwayo kuve kunonakidza uye, pamusoro pezvose, kureruka. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, izvo zvitsva zvishandiso kubva kuCupertino kambani inouya sehwaro ine 64 GB yeiyo iPhone 12 uye 12 Mini vhezheni, pamwe ne128 GB yeiyo "Pro" shanduro, saka vazhinji vanogona kutadza.
Tinokuratidza maitiro aunogona kubvisa zvisina basa zvemukati kubva paWhatsApp uye kusunungura app nzvimbo zviri nyore. Uye ikozvino vhezheni yakavandudzwa yeWhatsApp inosanganisira yemaneja maneja iyo iri nyore kushandisa uye iyo inokutendera iwe kuti utore nzvimbo ino nekukurumidza uye nyore.
Semamwe maitikiro, tinokusiya vhidhiyo kumusoro iyo inokutendera iwe kuteedzera ese mirairo nhanho nhanho pasina kunetsekana uye iyo yauchazokwanisa kubvisa iyo "marara" akachengetwa mukati WhatsApp uye izvo zvinoita kuti itore nzvimbo yakawanda munzvimbo yako yekuchengetera.
Kudzima nzvimbo inogara muWhatsApp iwe uchagona kuzviita nyore, kutanga iwe unofanirwa kuisa iko kunyorera uye tinya pa Kugadzika, iyo icon pazasi kurudyi kwekushandisa. Paunenge iwe wapinda mune ino menyu unofanirwa kuwana Self Storage uye data.
Kana tapinda muchikamu chino, tinya Tonga kuchengetedza uye isu tichaona iyo nyowani yekuchengetedza WhatsApp maneja iyo ichatibvumidza kuti tikurumidze kuwana zvikamu zviviri:
Multimedia zvemukati zvinopfuura 5 MB
Zvemultimedia zvemukati zvakatumirwa kakawanda
Saka isu tichakwanisa kuwana nekukurumidza zvakanyanya kupfuura kusvika zvino, apo taifanira kupinda mukukurukurirana nekutaura. Kana tangopinda mune zvemultimedia zvakakura kupfuura 5 MB, ichavhurwa seye gallery, yakafanana nekushandisa Mifananidzo iPhone, saka nzira yekudzima zvirimo yakafanana chaizvo.
1 Nzira dzekubvisa zvirimo
2 Matipi ekuvandudza nzvimbo
2.1 Dzima kurodha pasi otomatiki
2.2 Usachengetedza mapikicha ari mu gallery
Nzira dzekubvisa zvirimo
Chekutanga pane zvese isu tinogona kuvasarudza neruoko, nekuda kweizvi tinodzvanya bhatani sarudza Ini ndinodzvanya rimwe nerimwe kuti ndivasarudze, kana isu tinotsvedza nemunwe wedu pamusoro pemifananidzo yakawanda, nenzira iyi sarudzo inokurumidza ichaitwa. Sezvatakambotaura, zvinoshanda zvakafanana nezviri mu Mifananidzo kubva ku-iOS.
Kune rimwe divi, kana tikadhinda Sarudza kubva kumusoro, bhatani rinoonekwa pazasi ipapo inotibvumidza kusarudza mifanikiso yese kamwechete kuitira kuti iwe ugone kuvabvisa nekukurumidza netepa shoma.
Uye zvakare, paunogadzirira kudzima iyo pikicha, posita ine ruzivo ichaonekwa iyo inokutendera iwe kudzima zvese pasina kusarura chero zvemultimedia zvemukati, kana bvuma kubvisa zvese asi chengeta zvemukati zvatakatara "zvakaratidzwa", Izvi zvichatibatsira kuti tirambe tichichengeta maGIF edu anonyanya kushandiswa kana mifananidzo muWhatsApp nekukurumidza kuwana menyu, chimwe chinhu chinonakidza.
Matipi ekuvandudza nzvimbo
Sezvavanotaura, zvirinani kudzivirira pane kurapa. Zviripachena, kana isu tikatora mamwe matanho anotibvumidza kusevha zvakanyanya sezvinobvira marara anotipinda kuburikidza neWhatsApp, isu tinokwanisa kuzvinunura pachedu kubva mukuenderera mberi tichitarisira nzvimbo. Ndokusaka tichikurudzira kuti iwe utarise izvi zvinoratidza:
Dzima kurodha pasi otomatiki
Otomatiki kurodha zvemultimedia zvemukati hazvina basa zvachose mune dzino nguva. Ndiani mumwe uye ndiani ane mashoma akati wandei mapoka eWhatsApp zvisina basa senzvimbo yenharaunda, chikoro, kana pati musi weChina. Izvo hazvigoneke kuteedzera tambo yemapoka ese uye kunyanya memes ndiwo marongero ezuva, saka mifananidzo inoverengeka muzviuru.
Kuti usabvisa otomatiki kurodha mifananidzo muWhatsApp, pinda Kugadzika, Enda ku Kuchengetedza uye data uye ipapo iwe unowana dzakasiyana sarudzo ye Mifananidzo; Audio; Vhidhiyo neMagwaro. Zano rangu nderekuti iwe usabvisa zvachose ivo vese uye ndiwe unosarudza kuti ndeapi mapikicha uye mavhidhiyo aunosarudza kurodha pasi.
Kuti udziburitse unotoziva kuti iwe unofanirwa kungotinya pane yekutarisa uye ivo vanozoerekana voita chikamu chendangariro dzeWhatsApp kana chishandiso chako Mifananidzo, zvinoenderana neseturu iwe yawakagonesa, uye ndizvo zvaticha taura nezvazvo zvinotevera.
Usachengetedza mapikicha ari mu gallery
Nokusingaperi, vashandisi vazhinji vane iyo mamiriro akagoneswa ayo anoita kuti ese anotorwa WhatsApp mapikicha anopedzisira ari mukushandisa Mifananidzo, ndiko kuti, mune gallery ye iPhone yako. UyeIzvi hazvina maturo, nekuti zviri kukubhadharira zvinotyisa kuti uwane ako ako mafoto pakati peakawanda meme uye asina musoro kutora mafoto kuti wakakwanisa kugamuchira kuburikidza neDistusion Lists kana kuburikidza neWhatsApp mapoka.
Iwo akanakisa manomano ekushandisa WhatsApp senge pro
Kuremadza kuita uku kuri nyore, uye kutaura chokwadi, handioni chikonzero chimwe chete nei mumwe munhu achifanira kuvhenekera chinhu ichi nekuzadza yavo yese gallery nemarara atinogamuchira kubva WhatsApp, uye izvo zvinodarika zvemukati zvevakuru.
Kuremadza kugona uku zviri nyore.
Pinda chikamu Setup kubva pasi kurudyi
Paunenge uchinge uri mukati meiyo WhatsApp marongero menyu, enda kune iyo Chats
En Chats unogona kudzima mashandiro acho Sevha kuMifananidzo, iri mukutarisira kuita uku kugadzirisa
Tinotarisira kuti iwe unogona kushandisa zvakazara mirairo yedu kuti ubvise yakanyanya junk zvemukati kubva WhatsApp pane yako iPhone. Kunyange zvakadaro, tinoda kukusiyira chinyorwa chakakosha. Aya marongero eWhatsApp ekugadzirisa atinotaura nezvazvo pano anovandudzwa zvishoma, ndokuti, anogona kunge asati amiswa zvakadaro. Nekudaro, inotevera WhatsApp inogadziridza ichave ichisvika kune vese vashandisi zvishoma nezvishoma uye iwe zvechokwadi uchakwanisa kuita iri basa.
Aya matipi atakakupa kuti uchengetedze yakanyanya nzvimbo pane yako iPhone kuburikidza neWhatsApp inowirirana neshanduro dzese dzeIOS uye neshanduro dzese dzeWhatsApp, saka dzidziso iyi yakagadzirirwa kuti igone kushandira vese vanovhota, uye iwe unogona kunyange kuigadzirisa Android kana iwe ukapinda yezvirongwa chikamu. Isu tinokuudza iwe yakasara yenhau nezve WhatsApp yeIOS, saka tarisa pane iPhone News.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuburitsa nzvimbo paWhatsApp neyako nyowani space maneja
Nekuti vachagadzirisa riinhi kuti vave neWhatsApp mumatemu maviri akasiyana nenhamba yakafanana ????
Pese pandinoshandura terminal ndinofanirwa kuimisa uye tambo inorasika, iyo neteregiramu hapana dambudziko
Chekutanga vhidhiyo yeMagSafe Duo charger
Saizi saizi yeiyo iPhone 13 nekuvandudzwa muiyo Ultra Wide Angle